Onye ozi Seychelles na -ebuli ozi na -eme njem ụbọchị ndị njem
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Onye ozi Seychelles na -ebuli ozi na -eme njem ụbọchị ndị njem
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • nzukọ • News • ndị mmadụ • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Onye minista Seychelles n'ụbọchị ncheta ndị njem ụwa
N'ụbọchị a kwa afọ, Seychelles na -esonye na mba ndị otu 158 nke World Tourism Organisation (UNWTO) na -eme ncheta ụbọchị njem nlegharị anya ụwa. Ụbọchị a na -akọwapụta mkpa njem na njem nlegharị anya, yana kwa ụbọchị ememme na ntụgharị uche. N'okpuru isiokwu anyị "Ịkpụzi ọdịnihu anyị," anyị na -eto ndị anyị na onyinye ha.
Seychelles ọ bụla, mpaghara ọ bụla nke ọrụ akụ na ụba na mba kwesịrị itinye aka na usoro nke itozu oke.
N'ihi COVID-19, dị ka mba ndị ọzọ dị na mbara ala, Seychelles chere mbibi nke ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nso.
Mba ahụ ghọtara ngwa ngwa na ime mgbanwe maka ọnọdụ na -agbanwe agbanwe bụ isi ihe na -eme ka ọ dịrị ndụ.
UNWTO ewepụtala ụbọchị njem nlegharị anya nke ụwa 2021 dị ka ụbọchị ilekwasị anya na njem nlegharị anya maka uto. Mmụba gụnyere bụ ihe anyị na -agbasi mbọ ike ka anyị na -achọ ịgbake site na mmetụta nke ọrịa na -efe efe. Ọ bụkwa njem nlegharị anya ga -akwali ya. Ọ gbasara onye ọ bụla n'ime anyị, yana ndị Seychelles ọ bụla, akụkụ ọ bụla nke ọrụ akụ na ụba na mba anyị kwesịrị itinye aka na usoro a. Karịsịa na “ọnọdụ ọhụrụ a”.
N'ịbụ onye chere ụlọ ọrụ anyị ihu n'oge na -adịghị anya, anyị chọpụtara na ime mgbanwe maka ọnọdụ na -agbanwe agbanwe bụ isi ihe maka nlanarị anyị. Anyị were nnukwu ihe egwu mana gbakọọ ọnụ, na-ejikọ mgbake akụ na ụba na nchedo ahụike na nchekwa nke ndị ọbịa anyị site na mbido mbido 2021 nke usoro ịgba ọgwụ mgbochi siri ike megide COVID-19, na-enye anyị ohere iji obi ike mepee ụwa na March. Anyị na -aghọrọ mkpụrụ nke usoro ndị ahụ anyị jikọtara ọnụ.
Mana anyị ekwesịghị, na enweghị ike, nwee afọ ojuju. Ọ bụghị naanị anyị na -eme mgbanwe maka ọnọdụ ọhụrụ. Ndị asọmpi anyị na -eme ihe ike na ihe ọhụrụ na mkpọsa ahịa njem ha. N'agbanyeghị asọmpi siri ike na nke na -adịghị akwụsị akwụsị, anyị ga -aga n'ihu na -enye ọnụ ahịa ego. Anyị ga -ahụrịrị na ebe obibi na ọrụ anyị na -enye ruru ogo, na ọ ka nke ọma karịa ihe anabatara na nke a tụrụ anya ya. Anyị kwesịrị ilekwasị anya n'inye onyinye ka ukwuu nke ahụmịhe ndị njem nlegharị anya nke obodo na-egosipụta nke ika anyị. Ọzọkwa, na nke na -adịchaghị mkpa, anyị ga -aga n'ihu na -ewepụ omume niile na -akwadoghị na omume nzuzo nke na -emebi ụlọ ọrụ njem anyị na ile ọbịa, ma wetara ihe oyiyi anyị nkọcha.
N'ụbọchị njem nlegharị anya nke ụwa a, a na m akpọ oku maka ịdị n'otu, ịdị n'otu n'ime mpaghara njem. N'ihi na, karịa ọnụ ọgụgụ, anyị maara na n'azụ onye ọ bụla gbasara ụlọ ọrụ a, enwere onye ọrụ, enwere ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke. Yabụ iji bulie ụlọ ọrụ njem anyị na ọkwa dị elu wee merie ihe ịma aka dị n'ihu, na -enweghị ịkpa ókè na onye ọ bụla, anyị ga -esonyere ndị agha. Site na ịkekọrịta otu ọhụụ na otu ọchịchọ hụ ka njem na -aga nke ọma, site n'ịrụkọ ọrụ ọnụ, anyị ga -apụta mmeri. Enwere obere obi abụọ.
Site na mmasi dị ukwuu maka nraranye na oke mmasị gị, anyị na -ekele gị maka itinye obi gị na ụlọ ọrụ njem anyị.
Taa anyị n'emere gị. Obi ụtọ na Day Tourism World!